National Power News:: प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसीको चेतावनीः माइतीघर मण्डलाबाटै लड्छु National Power News:: प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसीको चेतावनीः माइतीघर मण्डलाबाटै लड्छु
प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसीको चेतावनीः माइतीघर मण्डलाबाटै लड्छु
Saturday, June 16, 2018 National Power
२ असार, काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले मुखमा टेप लगाएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको विरोधमा डा. केसीले शनिबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मुखमा टेप लगाएर माइतीघर चोकमा उभिएका डा. केसीले एउटा हातमा ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिदैनौं । निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ र अर्को हातमा ‘म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ’ भन्ने प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
डा.केसीले भ्रष्टाचार, वेथितीविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको बताए । तर, सरकारले नागरिकको मुख थुन्न माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको भन्दै डा. केसीले भने, म ओलीजीलाई भन्छु, हामी आवाज बुलन्द गर्छौं, यहीबाट लड्छौं । कसरी रोक्दा रहेछौं हेरौं ।’